FALANQEYN: Waa Maxay Sirta ka dambeysa In Hawadda Soomaaliya lagu wareejin Waayo DFS? – Xeernews24
FALANQEYN: Waa Maxay Sirta ka dambeysa In Hawadda Soomaaliya lagu wareejin Waayo DFS?
19. Mai 2017 /in Qormooyin/Articles /von admin
Tan iyo sanadka markuu ahaa 2002 waxaa socdey warmurtiyeedyo kala duwan oo ka hadlaya in Soomaaliya ay la soo wareegi doonto maamulka hawada dalka. Waliba waxaa lixdii sano ee ugu dambeeyey sii xoogeystey wararka sheegaya in Soomaaliya ay la soo wareegtey hawada Soomaaliya. Wararka noocaan ah oo ay qoreen warbaahinta Soomaaliya waana mid ay inta badan ka soo xigteen ICAO, UN iyo masuuliyiin Soomaali ah ayaa mar walba loogu warramaa in ay la soo wareegayaan maamulida hawada dalka, waa taxane socda sanad walba.
Hadaba, maxey tahey sababaha loo soo wareejin la’yahey hawada Soomaaliya, yaa ka dambeeya?,
yaase hada maamula?,
xafiiska ugu weyn ee laga hago hawada Soomaaliya halkuu ku yaalaa?,
yaa ka shaqeeya?,
yey u shaqeeyaan?, yey u dhasheen?,
mushaarkoodu muxuu yahey?,
su’aalahaas dhammaantood waxaan kaga warramayaa maqaalkan Insha Allaah.
Yaa Maamula Hawada Soomaaliya?
Hawada Soomaaliya waxaa haatan ay gacanta ugu jirtaa Ururka Caalamiga ee Duullimaadyadda Rayidka “The International Civil Aviation Organisation (ICAO). Waxaa si khaasa u maamula oo ka howlaga hey’ad kaloo UN iyo ICAO ay aasaaseen sanadka markuu ahaa 1996. Hey’adan waxaa la yidhaahdaa Civil Aviation Caretaker Authority of Somalia (CACAS) oo ah mid loo sameeyey iney buuxiso booskii Somali Aviation Authority. Waxaa kaloo si toosa uga howlaga oo arrimaha shaqada hawada Soomaaliya la socda hey’ada kale UNta ee ah UNDP.
Laga soo bilaabo 1996 illaa 2017 oo haatan aynu ku jirno waxaa hawada Soomaaliya si toosa u maamula hey’adahaasi kala duwan ee aan xusey.
Xagee laga maamulaa hawada Soomaaliya?
Xafiiska maamulida hawada Soomaaliya waxa uu ku yaalaa Nayroobi ee dalka Kenya. Laga soo bilaabo 1996 illaa haatan waxa uu xafiiska ku yaaley Nayroobi. Xafiiska waxa uu ku yaalaa halka ay ka daganyihiin hey’adaha aan soo xusey ee Nayroobi xafiiskoodu wada yahey.
Yaa ka shaqeeya xafiiska hawada Soomaaliya ee Nayroobi?
Xafiiskan waxaa ka shaqeeya shaqaalo caalami ah tan iyo goortii la aasaasey. Shaqaalahan caalamiga ah ee ajnabiga wada ah waxaa lagu shaqaaleysiiyey qaabka ay UN-ta ku shaqaaleysiiso dadka. Dadkan dhamaantood waa shaqaalo UN iyo ICAO. Waxa ay matalaan ICAO iyo UN. Waxaa xafiiska ka howlgala shaqaala gaaraya 15 illaa 20 qof oo iskugu jira kuwii hagayey hawada Soomaaliya, kuwii qaabilsanaa dhinacyada xafiiska sida dhaqaalaha, sharciyada, howlwadeenada iyo dhammaan wax walboo xafiis caalami u baahnaa.
Xafiiskan tan iyo goortii uu howlgaley wax ka badan laba qof oo Soomaali ah kama shaqeynin. Labadaa qof ee Soomaaliga ahna waligood kama qaban xafiiskan xil weyn. Labadan qof waxaa loo isticmaaley maqaar-saar si ay hey’adaha maamula hawada Soomaaliya ay ugu murmaan in xafiiska ay Soomaali ka shaqeeyaan hadii muran laga keeno, lagana keen muran, weyna is difaaceen dhowr mar oo hore lagu qabsadey sababta ay Soomaali uga shaqeynin xafiiska.
Dadkaa ka shaqeeya marka laga reebo 5 qof oo Kenyaati ah mooyaanee intooda kale waa dad ajnabi ah. Dhammaan dadkaasi waxa ay shaqaala u yihiin UN iyo ICAO.
Mushaarka ay qaataan shaqaalaha waa imisa?
Su’aashan waa mid u baahan baadhitaan, mana sahlana inaan halkan ku qiyaaso waayo dadka xafiiskan ka shaqeenayey mudadaas dheer intooda badan wali waa joogaan, mushaarkoodina in badan waa la kordhiyey, mushaarka ay ku shaqeeyaana waa mid caalami ah oo la socda waxa ay qaataan shaqaalaha wadamada kale ee ka shaqeeya maamulka hawada wadamadooda.
Hadaan tusaale soo qaadano shaqaalaha caalamiga ee ka shaqeeya maamulida hawada sida Air Traffic Controllerka musharakoodu sanadkii waxaa lagu qiyaasaa inta u dhaxeysa $60,000 & $230,000, waana shaqa aad u adag una baahan waxbarasha iyo khibrad dheeriya, waana mushaar uu u qalmo qofka khirbadaasi leh. Labada qof ee Soomaaliga mushaarkoodu ma dhaafo $100 bishii, mushaarkoodu ma kordho
Yaa ka dambeeya inaan la tababarin shaqaala Soomaali ah?
Wasiiradii soo marey Soomaaliya ee qaabilsanaa hawada Soomaaliya waxey in badan ka codsadeen ICAO iyo UN iney tababaraan shaqaala Soomaaliya oo ka howlaga xafiiska hagida hawada Soomaaliya ee Nayroobi iyo kan Muqdisho marka la soo wareejiyo maamulka. Waxa ay codsigaasi inta badan kala kulmi jireen ballan-qaadyo kala duwan sida in la tababari doono tira 20 qof oo Soomaaliyeed mudo 6 bilood gudahood. Ballan-qaadyadaasi dhammaantood midna kama hirgalin, lamana daba-galin, halkii baana looga hadhey.
Wasiir kaloo Soomaaliya oo isna qaabilsanaa hawada Soomaliya ayaa ka codsadey Turkey iney shaqaala Soomaliya u soo tababaraan oo qaabilsanaan doono hawada Soomaaliya marka ay Soomaaliya la soo wareegto. Turkey codsigii waa ay aqbashey sida wararkiii iyo shirarkii jaraa’id xilligaa ay qoreen inta u dhaxeysey sanadka markuu ahaa 2011-2013, balse ballan-qaadkaasi isna waxa uu noqdey mid aan yeelanin daba-gal, halkii baana looga hadhey.
Dowladda Kenya oo ayadna lug kula jirta xafiiska hawada Soomaaliya ee Nayroobi ayaa inta badan ka hadlin maadaama uu xafiiska dhulkeeda ku yaala, shaqaala Kenya u dhasheyna ay ku jiraan dadka ka howlaga, xafiiskana ka hela dakhli joogta ah oo iskugu jira canshuur iyo kiro.
Marka laga reebo ICAO, UN iyo Kenya , waxaa kaloo jira dowlada kale oo aan iyagana raali ka aheyn in ay Soomaaliya xafiiskeeda maamulka hawada Soomaaliyaay la wareegto.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/02/ICOA.jpg 194 259 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-05-19 17:55:292017-05-19 17:56:20FALANQEYN: Waa Maxay Sirta ka dambeysa In Hawadda Soomaaliya lagu wareejin Waayo DFS?
6-dii Degmo ee ay Hargeysa ugu Tala Gashay in ay Lunsado oo Farxad iyo Rayn-Rayn... DAAWO:-dhacdo yaable Xildhibano Iyo Odayal Ka Yimiday Dalka Jabuuti Ayaa Maanta...